स्तन मसाजको फाइदा (सूचीसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
स्तन मसाजको फाइदा (सूचीसहित)
प्रकाशित मिति : २४ मंसिर २०७६, मंगलबार
महिलाहरु आफू सुन्दर हुनका लागि ब्युटिपार्लर जान्छन् । फेसियल, स्क्रब र विभिन्न खाले उपाय अपनाउँछन् । आफ्नो स्वास्थ्यको लागी महिलाहरु जिम जाने, योगा गर्ने र स्वस्थ खाना खान्छन् । तर, आफ्नो स्तनलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्नेमा अनभिज्ञ नै छन् र खासै केहि पनि गर्दैनन् । स्तन मसाजमात्रै योन सामथ्र्यको लागि मात्र नभएर विभिन्न स्वास्थ्यमा पनि फाइदा पुग्छ ।
लिम्फैटिक फ्लुइड असर कम गर्छ
कसिलो लुगा विशेषगरी ब्रा लगाउँछन तब ब्रेस्टमा लिम्फैटिक फ्लुइडको काममा रोकावट आउँछ । जसले गर्दा ब्रेस्ट र अन्डरआम्र्समा भएको लिम्फ वा लसीका फ्लुइडलाई फेरी स्टिम्युलेट गर्नका लागि स्तन मसाज आवश्यक छ ।
ब्रेस्ट क्यान्सर कम गर्छ
कहिलेकाहीं स्तनमा गाँठो बन्न जान्छ यो आफैलाई पत्तो नै हुँदैन । पछि त्यही गाँठो विस्तारै क्यान्सरमा परिणत हुन्छ । नियमित स्तन मसाज गर्यो भने आफैले गिर्खा वा गाँठो समयमा नै पत्ता लगाउनाले तुरुन्त उपचार भई खतराबाट बच्न सकिन्छ ।
तेलले मसाज गर्नुहोस्
बदामको तेल, तिलको तेल, जोजोबा आयल वा क्यास्टर आयलले स्तन मसाज गर्नु बढी फाइदा हुन्छ ।
घरमा नै स्तन मसाज
नुहाइ सकेपछि हातमा तेल लगाएर हातले स्तन माथी गोलाकारमा मसाज गर्नुहोस् नुहाउन चाहानुहुदैन भने स्तनलाई तातो तौलिया राखेर हल्का वार्म गनुहोस् , मसाजको मोशनलाई कम से कम ३० पटक सम्म माथी र तलको दिशामा पनि मसाज गर्नुहोस् ।
माइटी गरुडा च्यारिटेवल ट्रष्टद्वारा खाद्यान्न सहयोग र स्वास्थ्य सामग्री सहयोग
कठमाण्डौं, ३० जेठ। माइटी गरुडा च्यारिटेवल ट्रष्टले निषेधाज्ञाका कारण समस्यामा परेका व्यक्तिहरुलाई खाद्यान्न सहयोग गरेको
स्याङ्जामा असार ७ गतेसम्म निषेधाज्ञा
स्याङ्जा, ३० जेठ: स्याङ्जामा आगामी असार ७ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ । गत वैशाख
इन्डोनेसियामा फेबु्रअरीपछि पहिलो पटक कोभिड–१९ सङ्क्रमितको सङ्ख्या उच्च
३० जेठ: इन्डोनेसियामा आइतबार २४ घण्टामा कोभिड–१९ बाट थप सङ्क्रमितको सङ्ख्या नौ हजार ८६८ भएको
काठमाडौँ, ३० जेठ: काठमाडौँ उपत्यकाका केही सेवामा सहजीकरण गर्दै असार ७ गते राति १२ बजेसम्मका
ख्वप अस्पताललाई स्वास्थ्य उपकरण सहयोग
मध्यपुरथिमि, ३० जेठ: चीनको एक नगरपालिकाले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप अस्पताललाई स्वास्थ्य उपकरणहरू सहयोग गरेको
काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमितको संख्या घट्दै
काठमाडौँ, ३० जेठ । आज देशभर २४ सय ७ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । थपिएका
काठमाडौँ, ३० जेठ: युरोपेली सङ्घ (इयू) का तीन सदस्य राष्ट्र स्लोभेनिया, अष्ट्रिया र माल्टाले कोभिडको
आज ३९ सय ९४ जना संक्रमणमुक्त
काठमाडौं, ३० जेठ । पछिल्लो २४ घन्टामा आज ३ हजार ९ सय ९४ कोरोना संक्रमणमुक्त
देव गुरुङको दाबी : अबको स्टेप सके संकटकाल लागु गरेर सेना पनि परिचालन गर्ने !
काठमाडौं, ३० जेठ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले राष्ट्रपति
बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी : ओलीतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू पनि समाप्त हुने भए
काठमाडौं, ३० जेठ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले ओलीतन्त्रमा